Fikaonan-doha mikasika ny firoboroboan’ny toe-karena Sinoa sy ny fifandraisan’ny Sinoa_Malagasy natao tetsy amin’ny Carton Anosy ny 25 novambra 2019 teo.
Ny fitondram-panjakana sinoa, nosoloin’ny masoivohony eto Madagasikara Rtao YANG Xiaorong tena, no nikarakara ny hetsika nampitondraina ny lohahevitra hoe « Mianatra ny fanaon’i Sina eo amin’ny fametrahana faritra manokana ara-toekarena (Zone Économique Spécial) eto Madagasikara ny lohahevitra niresahana.
Namaly ny fanasana ny Minisitra ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana, Rtoa Rakotomalala Lantosoa izay manamafy ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny firenena roa efa nanomboka tamin’ny taona 1972. Nandray anjara tamin’ity Fikaonan-doha ity ihany koa ny Minisitry ny Fambolena, ny Fiompianana ary ny Jono sy ny Filohan’ny Toeram-pampianarana politika (Institut d’Etudes Politiques).
Amin’izao fotoana izao ny fitondrana Sinoa dia efa mametraka paik’ady vaovao amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena an-dalam-pandrosoana aty Atsimo. Ny fiaraha-miasa maharitra misy eo amin’i Madagasikara sy i Sina dia miorina eo amin’ny lafiny samihafa : toe-karena, fahasalamana, kolontsaina ary koa fanabeazana.
Laharam-pahamehanana ho an’ny Governemanta Malagasy ny miezaka hatrany ny hamolavola ny firenena amin’ny alàlan’ny politika fampiroboroboana ny indostria amin’ny fametrahana ny faritra_fampivoarana_indostrialy ( zones d’émergence industrielles). Amin’ny taona 2020, ny Fanjakana Malgasy dia mikasa ny hamorona ZEI 4 hampiroboroboana ny indostria eny anivon’ny faritra.
Herinandron’ny mpandraharaha manerantany
Fanokanana ny tranon’ny mpanjifa